အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တီချမ်း နဲ့ သက်သတ်လွတ်
တီချမ်းလေးကို မေတ္တာထားကြပါ စေတနာထားကြပါ အကြင်နာပွားကြပါ မုဒိတာများကြပါ ချမ်းချမ်းလေးကို အားပေးကြပါကွယ်.........တီချမ်းကွ.............ဟေး..............ဟေး..............
ထားတော့ ခုဟာက တီချမ်း သက်သတ်လွတ်ချက်စားဖြစ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာတာကို ပြောချင်တာပါ။ တရုတ်တွေက ဘယ်နေ့တွေမှာလဲမသိဘူး သက်သတ်လွတ်ချက်စားကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ .......
.........မှိုတွေ ရရင် ဘေဘီကွန်းလေးတွေ ပြုတ်ပြီးသား ကိုထည့် ဆား အချိုမှုန့် ထည့် ပြီးတော့ ကော်မှုန့် ၂ ဇွန်းလောက် ကို ပန်းကန်လုံးလေးနဲ့ ရေဖျော်ထားတာ ထည့်ပြီး အဖုံး အုပ် ခဏ နှပ်လိုက်ပါ။ အဲ့တာဆို အိုအိရှိ မှိုဘေဘီကွန်းကြော်ရပါပြီ။ အရောင်လေးလှချင်ရင် ကြော်ပြီး အိုချခါနီးမှာ ကြက်သွန်မိတ်လေးတွေ ရှည်ရှည်လေး လှီးပြီး ဖြူး လိုက်နော်။
Posted by တီချမ်း at 9:07 PM
Labels: တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, သက်သတ်လွတ်, အတို့အမြုပ်, အရွက်ကြော်, အသုပ်များ
Hormiga February 9, 2012 at 3:52 AM
Dear T chan..
I am one of ur readers and I enjoy every food post of yours. Can you share the shan recipe of 'Arr Loo Htaung'if you know? :)
သက်သတ်လွတ်စားနေသူကြီး February 9, 2012 at 9:28 AM
တီချမ်း February 9, 2012 at 11:51 AM
နှဖူးစာ ရေ ချက်နည်းက အပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ အသားတုပြား မုန်ညှင်းချဉ် ကြော်နဲ့တူပါတယ်
အာလူးကိုကြိုပြုတ်ပြီး ညက်ညက်လေးထောင်းထားပါ အရမ်းမကြေချင်ရင် ပြုတ်ပြီး ချေထား
ပြီးတော့ ကြက်သွန်ဖြူနီ ဆီသတ် မုန်ညှင်းချဉ် ထည့်ကြော် အသားကြိုက်ရင် ထည့် အာလူးထည့် ဆား အချိုမှုန့် ထည့် ရပြီ
ဒေါ်သလင်း ချက်စားပေါ့ မနေ့ကတောင် မာလာဟင်းလုပ်တယ် တင်အုံးမယ် အားရင် လာလည်အုံးလေ
taw vae taw naing lwan .
tat vae tat naing lwan.
chat vae chat naing lwan.
der doe yet t chan.
အားလုံးကြိုက်လို့အကုန်စားလိုက်ချင်ပေမဲ့မစားရသွားရည်ကျသွားပါတယ်။အားလုံးထဲမှာပန်ထွေဖျော်ရယ်၊မှိုကြော်ရယ်၊ကြွက်နားရွက်မှိုပဲကြာဆန် ကြော်ရယ်၊ဂျူးမြစ်သုတ်ရယ်အကြိုက်ဆုံးဘဲတီချမ်းရေ။တိုပာူးကြိုရင်တိုပာူးတထုတ်ကိုရေဘယ်လောက်ထည့်ရလဲကြိုလိုက်တိုင်းအဆင်မပြေလို့။ မြကျေး
တီချမ်း February 9, 2012 at 3:45 PM
အဲ့တာက ထုံးစံအတိုင်း စိတ်မှန်းပဲမြကျေးရေ
တီက တိုဟူး အနှစ် ကို ဇလုံ နဲ့ တိုက်ထားတာလေ
ရေက လိုသလောက်ပဲ ကြို တိုဟူးကလဲ လိုသလောက်ပဲ ထည့် ကျန်တာကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားရင် နောက်တခေါက် ထပ်ကြိုလို့ ရတယ် ကြည့်ကျက်ထည့်ပေါ့ အေ
နှစ်ယောက်စာ ဆိုလဲ ရေ ကို ခေါက်ဆွဲထုပ်ပြုတ်ရင် ထည့်သလောက်ပဲ ထည့် ပန်းကန်နဲ့ချင်ထည့်လဲ ရတယ် နောက်နေ့သေချာလုပ်ပြမယ်နော်
Evy February 9, 2012 at 4:34 PM
အမယ်လေးလေး။ စားတဲ့ ဟင်းတွေက နဲနဲနောနောပါလားနော်။ မနာလိုကို ဘယ်လိုဖြစ်ရမှန်းတောင် မသိလောက်အောင်ပဲ။
လူခေါ်နေတာ တော်လောက်ပြီနော်။ အညှိုးနဲ. (စာလုံးပေါင်းမှားရင်သည်းခံပါ၊ အငြိုးလား အညှိုးလားမသေချာလို.ရှည်ရှည်ဝေးဝေးကြိုတောင်းပန်ထားတာ) လုပ်နေသလားထင်ရတယ်။
ံအံ.ပါရဲ.။ချက် ချက်နိုင်လွန်း၊ စား စားနိုင်လွန်း တကထဲမှ..
Kyaw Hnin Se Lwin February 9, 2012 at 6:34 PM
ဟင်းပွဲတွေက ဖတ်ရင်းဆုံးကို မဆုံးနိုင်ပါလား ဖတ်ရတာ မောထှာ
san htun February 10, 2012 at 9:16 AM
hote pa a, phat ya tar maw htar but phat yin tha yay tauk tauk kya tal, taw chat
တီချမ်း February 13, 2012 at 1:42 PM
အီဗီ ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ ဖိပြီးမှာ သက်ပြင်း ရှည်ရှည်ချပြီး အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းပြန်ရှုကြည့်ပါ
အနော ၁ လူတွေက တီချမ်း ဟင်းချက်တာပဲ ဘတ်ချင်တယ်ဆိုလို့လေ ခုတော့ စာအုပ်လုပ်နေတယ် တီ့ဆောင်းပါးလေးတွေ
အနော ၂ သက်မလေး မ ပြီး ဘတ်ပါ ဘတ်လို့ ဆုံးရင် ရေသောက် ကေနော် ပိစ်
ဆန်းထွန်းရေ ဗိုက်ဆာရင် လာစားပေါ့
အနော ၃ ဟုတ်ပါ့ တော်ချက်ကတော့ ပြောမနေနဲ့ လှကလဲ လှသေးတယ် အော် တီတော်တာတွေ ကိုပိုစ့် တခုရှိသေးတယ် ဒီမှာ http://chenaddy.blogspot.com/2009/03/blog-post_19.html ရှာဘတ်ကြည့်လိုက်နော်
အနော ၄ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ် ကလေးကို လင်ကို ကြည့်ခိုင်းလေ တီကတော့ အဲ့လိုပဲ ပစ်ထားပေးလိုက်တယ် ဟိဟိ